जनकपुरमा विवाहपञ्चमीको तयारी सुरु : अयोध्याबाट जन्ती नआउने ! | Janaki Post
Home Covid-19 जनकपुरमा विवाहपञ्चमीको तयारी सुरु : अयोध्याबाट जन्ती नआउने !
जनकपुरमा विवाहपञ्चमीको तयारी सुरु : अयोध्याबाट जन्ती नआउने !
२६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०९:४३
जानकी पोस्ट,जनकपुरधाम । भगवान राम र सीताको विवाह भएको स्मरण गर्दै प्रत्येक बर्ष मनाइँदै आइएको विवाहपञ्चमी महोत्सव (Vivahpanchami Mohatsab) यस पटक खल्लो हुने भएको छ । आन्तरिक विधि गररे यस पटक विवाहपञ्चमी (Vivahpanchami) मनाइनेछ ।
कोरोना भाइरसका कारण स्थानीय प्रशासनले भीडभाड नगर्न आदेश दिएका कारण कारण अन्य बर्ष जस्तो यस पटक भीडभाड देखिने छैन्। यसबाहेक कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन बन्द गरिएको नेपाल–भारत सीमा अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन्। जसका कारण भारतीय श्रद्धालु आउने सम्भावना पनि न्यून छ ।
‘कोरोना भाइरसका कारण प्रशासनले भींडभाड नगर्न रोक लगाएकोले यस पटक विवाहपञ्चमीको (Vivahpanchami Janakpur) अवसरमा कुनै उत्सव गरिएको छैन’ जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ रामरोशन दासले भने,‘विधि पु¥याउने काम मात्रै हुन्छ ।’ सीमा बन्द भएका कारण यस पटक भारतबाट जन्ती आउने सम्भावना पनि नरहेको उनले सुनाए । ‘जन्ती आउने सम्बन्धमा यसअघिका बर्षहरूमा पहिला नै जानकारी पठाउने गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘तर यस पटक भारतको अयोध्याबाट जन्ती आउने÷नआउने विषयमा कुनै खबर आएको छैन ।’ विवाहपञ्चमीकै अवसर पाररे भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ पनि सहभागिता जनाउँदै आएका थिए । तर,यस पटक देशका ठूला नेता वा मन्त्री आउने सम्भावना नरहेको महन्थ दासले बताए । आन्तरिक विधि गरेर विवाहपञ्चमी मनाउनका लागि यस पटक सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरिदैंछ ।
जसअन्तर्गत मंसिर २९ गते जनकपुर (Janakpur) नगर दर्शन, ३० गते फुलबारी लिला, पुस १ गते धनुष यज्ञ, पुस २ गते तिलकोत्सव, ३ गते मटकोर, ४ गते शुभ विवाह र ५ गते रामकलेबा विधि गरिनेछ । (Janaki Mandir) जानकी मन्दिरका महन्थ रामतपेश्वर दासले बर्षाैदेखि चल्दै आएको परम्परालाई सीमित रुपमा मनाइने बताए । भीडभाड हुने कुनै विशेष गतिविधि नगर्ने उनको भनाई छ ।
कोरोना भाइरसका कारण राम नवमी, जानकी नवमीसहितका उत्सवहरू पनि खल्लो नै रहेको थियो। आन्तरिक पूजापाठ बाहेक कुनै पनि गतिविधि गरिएको थिएन । कोरोनाका कारण सरकारले गरेको लकडाउन अवधीभर मन्दिरमा पूजापाठ गर्नबाट समेत सर्वसधारण बञ्चित भएका थिए ।
Previous articleप्रदेश २ : चोरीका मोटरसाइकलसहित दुई जना पक्राउ
Next articleप्रदेश २ को लोकसेवा विज्ञापनको दस्तुर खारेज हुनुपर्छ : ई. कुशवाहा
Janaki Post - २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०९:४३ 0